Duqa degmada Beledweyne oo shaqo joojin lagu sameeyay amarna lagu bixiyay in la soo xiro | Weheliye Online
Duqa degmada Beledweyne oo shaqo joojin lagu sameeyay amarna lagu bixiyay in la soo xiro
XOGTA: Kuraasta lagu doortay Garoowe, Muqdisho & Dhuusa-mareeb “Maxay ka sinaayeen”
BALADWEYNE: Damaca Tagida Guudlaawe, Doorka Farmaajo,Hardanka 25 Kursi & Qeylada M.Musharaxiinta!
Wararkii ugu dambeeyay xaalada Suuqa Bakaaraha oo maalintii labaad u xidhan kooxda Daacish
Yuusuf Axmed Hagar Dabageed gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ku amaray ciidamada nabad-galyada in xabsiga la dhigoloo Duqa degmada Beledweyne Cali Cabduqaadir Faarax Sandheere iyo labo mas’uul kale oo ka tirsan maamulka dowladda hoose.
Qilaaf soo ifbaxayaay oo u dhaxeeya maamulka sare iyo Duqa Baladweyne ayaa keenay inuu diido amaro kasoo baxay gudoomiyaha gobolka kaas oo keentay in shaqada laga joojiyo Duqa degmad Baladweyne.
Gaar ahaan guddoomiyaha gobolka oo warbaahinta la hadlay ayaa ku eedeeyay duqa degmada in uu sameeyay sida uu hadalka u dhigay amar diido kaddib markii looga yeeray ayuu yiri xafiiska maamulka gobolka.
‘’Duqa degmada Beledweyne waan u yeer-nay, laakiin waa uu diiday, taa badalkeeda waxaa uu ka doorbiday boob-ka hantida dadka, sidaa daraadeed waxaan ku war-galinayaa laamaha amniga in tallaabo adag oo degdeg ah laga qaado’’ ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Hiiraan.
Laakiin dhinaca kale duqa degmada Beledweyne Cali Sandheere ayaa sheegay in shaqo ka joojinta uu sameeyay guddoomiyaha gobolka Hiiraan tahay mid sharci darro ah, waxaana uu ku eedeeyay guddoomiyaha in uu weerar ku soo qaaday saakay xarunta dowladda hoose ee degmada Beledweyne.
Mas’uuliyiinta sare ee maamulka Hirshabeelle ayuu ugu baaqay duqa degmada in ay arintan soo fara-galiyaan kana bixiyaan sida uu hadalka u dhiggay jawaabta ku haboon.
Mas’uuliyiinta kale ee guddoomiyuhu shaqo joojinta ku sameeyay ayaa waxaa ay kala yihiin Xogyihii dowladda hoose iyo agaasimaha waaxda dhulbixinta.
yuusuf axmed ayaa ah hogaamiye shaqo kar ah kasoo markii loo dhiibay xilka uu shaqo ka bilaabay hishiisiinta beelo walalo ah oo ku dagaalamay Baladweyn iyo isku furista wadooyinka gobolka oo ah kuwa godoonsan inta badan.
Previous articlewafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dalka M.A.Farmaajooo u ambabaxay Koofur Sudan
Next articleWasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle oo xilka qaadis ku sameeyay duqii degmada Beledweyne Cali Cabduqaadir Sandheere